आफ्नाे लागी धेरै अवसर कसरी प्राप्त गर्ने ? सहयाेगी टिप्स - ज्ञानविज्ञान
हामी सबै अवसरकाे पर्खाइमा हुन्छाैँ । तर यत्तिकै बसेर अवसर आउँदैन । त्यसकाे लागी आफैले प्रयास गर्नुपर्छ । एउटा काममा अत्यन्तै व्यस्त रहनु भयाे भने तपाइलाइ अवसर कति बेला आयाे र गयाे पत्ताे हुँदैन । तपाइकाे हरेक दिन तनाव र एकाेहाेराे रूटिनमा बितिरहेकाे हुन्छ ।
त्यसैले आफ्नाे लागी समय निकाल्नुहाेस् । दिमाग फ्रेस बनाउनुहाेस् । रचनात्मक कराहरू साेच्नुहाेस् । भेटघाट, कार्यक्रममा सहभागीता आदिकाे लागी समय मिलानुहाेस् । सानै भएपनि काम पाउनुभयाे भने इमान्दारी पुर्वक काम गर्नुहाेस् । जब तपाइले काम गरेर अरूप्रति विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ, तब त्यही नै तपाइकाे लागी अवसरहरू सिर्जना हुन थाल्छन् ।
र, त्यही काममा नै तपाइले आफ्नाे करियर देख्नुभएकाे छ भने सुरूवातमा पैसालाइ भन्दा कामलाइ बढी महत्व दिनुहाेस् । त्यसपछी तपाइले अरू अवसर पाउँदै जानुहुन्छ र आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ । आफुले काम गर्ने क्षेत्रका मानिसहरूसँग चिनजान गर्नुहाेस् । ती मानिसहरूसँगकाे भेटमा आफ्नाे विचार राख्रे गर्नुहाेस् ।
आफ्नाे क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका आफ्नाे उमेरका व्याक्तिलाइ साथी बनाउनुहाेस् । यसले गर्दा आफ्नाे कामकाे क्षेत्रका नयाँ अवसरहरूकाबारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ । तपाइलाइ कसैले केही अवसर दियाे या आफ्नाे काममा कुनै पनि सहयाेग गर्याे भने उसलाइ भन्यवाद दिनुहाेस् ।
उसलाइ धन्यवाद पत्रकाे रूपमा एमेल गर्न सक्नुहुन्छ या भेटेर धन्यवाद स्वरूप केही दिन सक्नुहुन्छ । यसाे गर्दा तपाइकाे सम्बन्ध बनि रहन्छ । तपाइलाइ अवसर दिएकाे व्याक्तिमा पनि तपाइ प्रति सकारात्मक धारणा बन्छ । जसले गर्दा तपाइलाइ अरू अवसर मिल्ने सम्भावना रहन्छ र तपाइकाे नेटवर्क पनि पनि बिस्तार हुन्छ ।
अपडेट रहनुहाेस् । पत्रपत्रिका पढ्नुहाेस् । आफुले काम गर्ने क्षेत्रमा आइरहेका नयाँ-नयाँ कुराहरू खाज्नुहाेस् । त्यस्तै, हरेक दिन पढ्नुहाेस् । आफ्नाे रूचिका पुस्तकहरू सँकलन गर्नुहाेस् र हरेक दिन केही न केही पढ्नुहाेस् । सामाजिक सँजाल प्रयाेग गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फाेटाे भन्दा बढी आफ्नाे काम र विचारहरूकाे बारेमा पाेस्ट गर्नुहाेस् ।
त्यहाँ तपाइकाे साथी मध्यबाट नै कुनै अवसर आउन सक्छ। तपाइ सम्पुर्ण कुरा जानेकाे कहिल्यै पनि बन्न सक्नुहुन्र । समय अनुसार काममा, काम गर्ने तरिकामा, मानिसहरूकाे विचारमा, बजारकाे मागमा सबैकुरामा परिवर्तन भइरहेकाे हुन्छ । त्याे परिवर्तन अनुसार आफुलाइ हिडाउनुपर्छ । हरेक दिन केही कुरा सिक्नुपर्छ ।
अरूकाे नक्कल नगर्नुहाेस् । अरूकाे नक्कल गर्दा सुरूमा त तपाइ राम्राे देखिन पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसले तपाइ प्रति मानिसहरूकाे नकारात्मक धारणा बन्र सक्छ । त्यसैले सिर्जनात्मक बन्रुहाेस् । आफुले गरी रहेकाे काममा तपाइकाे आफ्नाे क्षयमता, साेचलाइ पनि देखाउनुहाेस् । यसले गर्दा तपाइकाे छुट्टै परिचय बन्र सक्छ र नयाँ अवसरहरू आउँछन् ।
नुनले हृदयको चाल र रक्तचापलाई असर गर्नका साथै दिमाग र समग्र स्मरण शक्तिलाई असर गर्छ । चिनीको प्रयोग बढी गर्नाले पनि स्मरण शक्ति, सिक्ने क्षमता र श्रवण शक्तिमा ह्रास आउने गर्छ । चिया, कफी तथा धूमपानबाट टाढा नै बस्नु राम्रो । नशालु पदार्थ नखाने र मद्यपान नगर्ने । सन्तुलित पौष्टिक खाना नियमित समयमा खाने ।
मौसमअनुसारको फलफूल तथा तरकारीहरू खाने । अण्डा, माछा, दूध, दही, मही, चीज, मख्खन खाने । खानपानमा ध्यान दिन नसक्दा स्मरणशक्ति घट्दै जान्छ भनेपछि गएर विभिन्नप्रकारका मनोविकारहरू जस्तै, अल्जाइमर, डिमेन्सिया, डिप्रेसन र एन्जाइटीसमेतको जोखिम बढाउन सक्छ ।
कहिलेकाहीँ निद्रा नपर्नुमा प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवसिर्जित दुर्घटना, विनाश वा नजिकका व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ । पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ । डिप्रेसन, डायबिटिज, मुटुसम्बन्धी रोग, डिमेन्सिया निम्त्याउँछ । गुणस्तरीय निद्राले व्यक्तिहरू, विद्यार्र्थी र धावकको प्रस्तुतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
पर्याप्त गुणस्तरीय निद्राले दिमाग फुर्तिलो बनाउँछ, ऊर्जामा तीव्रता दिन्छ, स्मरण शक्ति बढाउँछ । पर्याप्त निद्राले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । स्वस्थ सेल डिभिजनलाई प्रोत्साहन गर्छ । शारीरिक शक्ति वृद्धि गर्छ । दिमागको कार्यमा सुधार ल्याउँछ । हर्मोन प्रणालीले राम्रो काम गर्छ । तनाव हटाउँछ र नकारात्मक आवेग घटाउँछ ।
साधारण खेलहरूले वस्तुको नामकरण र सानो पजलहरू सँगै समाहित गर्ने, सामाजिक र शैक्षिक विषय बनाएर, बच्चाको बुद्धिमा सुधार गर्दछ । बच्चासँग कुरा गर्दा तिनीहरूको शब्दावली बढ्छ । यो उनीहरूको सामान्य बुद्धि स्तरका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । न्युरोसाइजिस्टद्वारा लामो समयदेखि गरेको अध्ययनले रमाइलो गतिविधि जस्तैः शब्दकोश, सुडोकु, चेसले व्यक्तिको संज्ञानात्मक क्षमताको सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।
आफैँले पहिले बेवास्ता गर्दै आएका जटिल कार्यहरू जस्तैः अप्ठ्यारो पाठ्यक्रम, दोस्रो भाषा सिक्नु, असजिलो किताब पढ्ने ती सबै समस्या समाधानको सक्रियताका साथ हरेक दिन सिक्ने र बच्चालाई पनि समान काम गर्न सिकाउने । धेरै देशमा जोखिममा रहेका बच्चालाई गहन प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान गर्न शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमले केही हदसम्म शैक्षिक उपलब्धि गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, वास्तवमा बच्चाको सामान्य बौद्धिक क्षमता सुधार गरेको देखाइएको छैन । यी कार्यक्रमले बच्चाका लागि एक राम्रो उत्तेजक वातावरण प्रदान गर्छ । उनीहरूको शैक्षिक अनुभव तीव्र बनाउँछ ।
Don't Miss it तपाइकाे कतै दिउँसै सपना देख्ने बानी त छैन ? यस्ता छन् फाइदै फाइदा
Up Next यस्ता भ्रम जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन्, जान्रुहाेस्
कसिलो ब्रा लगाउनुहुन्छ ? हेर्नुस यसो गर्दाका बेफाइदा
-कहिलेकाहीँ नमिलेको ब्रा र अन्डरवेयर लगाउँदा टाउको, छाती, ढाडको हड्डीमा पनि असर पर्छ । हड्डीमा असर गर्दा कहिलेकाहीँ श्वासप्रश्वासमा पनि…
बनियानी, झापा, ९ कात्तिक (रासस) : झापाका विभिन्न स्थानमा डेंगुको संक्रमण बढ्न थालेपछि भद्रपुर नगरपालिकाले त्यसका नियन्त्रणका लागि नौ दिने…